निश्चल पनि विवादमा ? राजेश, रेखा र भुवनको बारेमा बोले - www.dthreeonline.com
निश्चल पनि विवादमा ? राजेश, रेखा र भुवनको बारेमा बोले
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३१, २०७७ समय: ९:३३:५८
ईटहरी/ लकडाउन भए देखि धेरै कलाकार विवादमा आए । सामाजिक संजाल नै आलोचनाले भरिएको छ । फिल्म क्षेत्रसंग सम्बन्धित संस्थाहरुले गाली गलौज गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने भनेर विज्ञपति पनि निकालिसकेको छ । यस्तैमा, अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत आलोचित भैरहेको छ ।
केही बर्ष अगाडिको अन्तर्वार्तामा राजेश हमाल, रेखा थापा र भुवन केसि सुपरस्टार होइनन् र उनिहरुले फिल्म क्षेत्रलाई केही योगदान नदिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछी उनी दर्शकको गाली खाइरहेका छन् ।
उनले अन्तरवार्तामा बोल्दै भने-‘रेखा जि को, राजेश जि को फिल्म कमै हेरेको त्यसैले मेरो नजरमा वहाँहरुको फिल्म चलेको छैन । फिल्म क्षेत्र लथालिङ्ग, भताभुंग थियो । हामी बाटो बनाउदै छौँ ।’ यतिबेला सामाजिल संजालमा निश्चललाई अनेक गाली आइरहेको छ । उनी ट्रोलको सिकार भएका छन् । फिल्मकर्मिहरुले पनि उनलाइ आफ्नो हैसियत बिर्सिएर यस्तो बोलेको भनोरहेका छन् ।